पुरुषलाई पनि पीडा छ: रेखा थापा – Pahilo Page
पुरुषलाई पनि पीडा छ: रेखा थापा
२४ फाल्गुन २०७८, मंगलवार १२:५८ 246 पटक हेरिएको
काठमाडौं । अभिनेतृ रेखा थापाले पुरुषलाई पनि पीडा र दुःख भएको बताएकी छन् । ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च)का अवसरमा राजधानीमा आयोजित ‘महिला हिजो आज र भोलि’ विषयक अनेरास्ववियू क्रान्तिकारिको सडक बहसमा सम्बोधनका क्रममा नायिका थापाले यस्तो बताएकी हुन् ।
कार्यक्रममा उनले पुरुषको दुःख र पीडालाई हटाउनका लागि पनि घरभित्र एउटा योद्धा छोरी जन्मिनुपर्ने बताईन् । ‘पुरुष त भमँरा हो, पुरुषले त फूलमा बस्छ पनि यस्तो पनि अभिव्यक्ति हुन्छ ? यस्तो पनि समाज हुन्छ ? हामी कुन खालको समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौँ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन् । उनले आफु पुरुष विरोधी नभएको पनि बताईन् । ‘पुरुषलाई पनि पीडा छ, पुरुषलाई पनि दुःख छ । तर, त्यो दुःख र पीडा हटाउनका लागि त्यो घरभित्र एउटा योद्धा छोरी जन्मिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘ एउटा कम्जोर महिलाको बुवा, श्रीमान, प्रेमी, भाई कमजोर नै हुन्छ । अनि कुन क्रान्तिको र पुरुषत्वको कुरा गर्छौैँ हामी यो समाजमा ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
उनले नारीलाई नजर अन्दाज गरेर महिला बन्ने तालिम दिएर हामीले कुन समाजको परिकल्पना गर्न खोजिरहेका छौँ भन्दै प्रश्न गरिन् । यस्तै सिंहदरबारभित्र महिलाको सहभागिता कम भएको पनि उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलको पार्टी महाधिवेशनमा महिलाको चर्को आवाज उठ्ने गरेता पनि पछि गएर महिलाहरु कोटामा मात्रै सिमित हुने गरेको उनले गुनासो गरिन् ।
देश र जनताका लागि आवाज उठाउने नेताहरु सत्तामा पुगेपछि गरिब जनताको पीडालाई कुल्चने गरेको पनि उनले उल्लेख गरिन् । ‘हामीहरु देशका लागि आवाज उठाउँछौँ, जब सत्तामा ती हामीले मानेका नेताहरु पुग्छन्, उनीहरुको छेउमा को हुन्छ ? आफ्नो श्रीमती, आफ्नो भदै, प्रेमीका, छोरी, ज्वाइँ यो बोहक त मैले कोहि पनि देखेको छैन’, उनले भनिन् । ‘बर्षौदेखि संघर्ष गरेका कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाईन्छ । अनि यसरी राजनीती गरिएको छ, यो सताब्दीमा पनि खोई त महिलाहरुको आवाज ? खोई त बोल्न सकेको आफ्नो नेताको विरुद्धमा ? खोई त कदम चालेको ? भाषाणले मात्र सीमित हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई ।’ उनले भनिन् ।
यस्तै उनले महिलामा हेर्ने दृष्टिकोण महिला मात्रै भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘हामीलाई मान्छे हुन दिएको भए पनि समानता हुन्थ्यो होला । महिलाको शक्तिशाली रुप भनेको प्रेम हो ।’
भुपेन्द्र थापा मगर बने नेपाल आइडल–४ का विजेता
प्रकाश सपुतको ‘पिर’ गीतको विवादित दृश्य हटाइयो, नयाँ भिडिओ अपलोड
मिस वर्ल्डको उपाधि पोल्याण्डकी क्यारोलिनालाई, नेपालकी नम्रता टप ३० मा सिमित
‘एउटा सच्चा कामरेडको कथा हो ‘पिर’, राजनीतिक पूर्वाग्रह छैन्’
प्रकाश सपुतको ‘पिर’लाई बाबुराम भट्टराईको समर्थन
‘नारीले ‘नो’ भनेपछि ‘नो’ बुझौं’
बालबालिकालाई गाईको दूध खुवाउँदा आन्द्रामा ‘प्वाल’
२२० किलोबाट ७५ किलोको भए अदनान सामी, यी चिज खाएर घटाए तौल
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै आजबाट गाडी भाडा पनि घटाउने विभागको तयारी
युक्रेनको पूर्वी शहर लिसिचान्स्कमा रुसी र यूक्रेनी सेनाबीच गोलाबारी
भारतीय विमानमा अचानक धुँवा भरिएपछि…
नगरप्रमुख हर्क साम्पाङको अगुवाइमा धरानका स्थानीयवासीको श्रमदान
ईश्वर पोखरेलको क्षेत्रमा रञ्जु दर्शनाको उम्मेदवारी
बाढी पूर्वानुमानः यी नदीमा बहाव बढ्ने
पहिरोमा परी भारतमा २५ जनाको मृत्यु
महन्थलाई ओलीको प्रस्तावः गठबन्धन गरेर चुनावमा जाऔैं
हिमालयन हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
एचआईडीसीएलको लिलामी सेयरमा आवेदन दिने अन्तिम दिन आज
युवतीले विद्यालयमै पासो लगाइन्